Uhlelo Lokuhlanzwa Kwegesi Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Uhlelo Lokuhlanzwa Kwegesi
Imininingwane ngokuya ngesimo sangempela esenziwe ngokwezifiso, ihlukaniswa njengezinsimbi zekhabhoni nezinsimbi zoqweqwe lwawo.
Uhlobo lwemishini yokuhlanza igesi, izidingo ezikhethekile namazinga, sicela usazise.
Idivayisi yokuphepha ukuvikela ukuphepha kwemishini nokuvikela izimo eziphuthumayo; sicela ushiye umyalezo uma unezidingo ezikhethekile.
It kungenziwa ihlukaniswe koqweqwe lwawo impahla futhi engagqwali impahla. Ngokuqukethwe kwe-biogas okuhlukile nokukhishwa kwe-biogas, kukhethwa izinhlobo ezahlukahlukene.